Banyere Anyị - Shanghai Nụchaa Hotel enye Co., Ltd
nweta akwa nhicha
DOBBY SHEETING ákwà
ruo eruo mpempe akwụkwọ
Ọgwụ ákwà ihe ndina
Hotel Bath Linin
ịsa ákwà mgbochi
Hotel ndina Linin
Akwa nsachi akwa
Fiteed mpempe akwụkwọ
ohiri Isi Nchebe
Hotel FB Linin
Isiokwu na-agba ọsọ
Jacquard SHEETING ákwà
na-asa ákwà akpa
Abụghị kpara akpa
Plain SHEETING ákwà
Isiokwu ákwà ọcha
Bath Linin katalọgụ
Ákwà ihe ndina katalọgụ
Ịchọ Mma Products katalọgụ
Company Okwu Mmalite:
S hanghai Nụchaa Textile Limited, dị ka a na-eduga na ọkachamara hotel textiles emeputa ke East China, anyị na-elekwasị anya na mpaghara ebe a karịa afọ 15. Anyị isi ngwaahịa gụnyere: hotel bed linens, hotel akwa nhicha, hotel eji enyere ndụ aka, F & B linens. Anyị na-enye zuru ezu textiles ngwọta maka hotel iche iche, ụgbọ elu, ụgbọ mmiri, n'ụlọ ọgwụ.
T hrough anyị zuru ụwa ọnụ mmadụ na ndị nkesa, ugbu a, anyị na-enye textiles ọtụtụ ererimbot ama hotel iche iche, dị ka Intercontinental, Marriott, Hilton, Starwood, Hyatt, Shangri-la wdg Anyị mbupụ karịa 25 mba.
O Ua sales ụlọ ọrụ na lọjistik ọrụ na-dị na Chinese oge a obodo - Shanghai, na anyị rụpụta isi ke Central China n'ógbè. Ọ na-akwado anyị ala na-eri na elu arụmọrụ ọrụ.
M ore karịa afọ 15 hotel ọkọnọ ahụmahụ, 10+ afọ ọkachamara ọbịa akwa factory ọrụ, nke ga-enye gị ihe kasị mma ahịa ọrụ, anụ àgwà na asọmpi price. Anyị na-atụ anya nwere mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ na n'ụwa nile nkesa, mmadụ, hotel iche iche!